ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး...! - Thadin
HomeNEWSဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး…!
May 19, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး…!
ကျိုက်​ထီးရိုး ဘုရားပွဲရာသီက သီတင်းကျွတ်​လပြည့်​​နေ့မှ ကဆုန်​လပြည့်​​နေ့အထိ၇ လတိတိ​တောင်​ ကျင်းပ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။
ဖွင့်​ပွဲ​နေ့နဲ့ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကို အခန်းအနား နဲ့ ကျင်းပပြီး အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ရပါတယ်​။ ပွဲ​တော်​စတင်​ခင်းကျင်း​တော့မှာမို့ ​တောပိုင်​​တောင်​ပိုင်​ အ​စောင့်​အ​ရှောက်​များနဲ့ မြင်​အပ်​မမြင်​အပ်​ သတ္တဝါများဘုရားနယ်​​မြေမှ ​ဝေးရာသို့ ဖယ်​ရှား​ပေးကြပါဆိုပြီး အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ရပါတယ်​။
အဲဒီအခါမှာ ဝမ်းနည်းငို​ကျွေးကြသလိုမျိုး ကြားကြရတယ်​လို့ ရန်​ကုန်​လသာမြို့နယ်​မှ တရုပ်​ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းက နှစ်​စဉ်​သွားဖူးလို့ ထူးဆန်းစွာကြုံခဲ့ကြားခဲ့ရလို့ သိရပါတယ်​။
ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကဆုန်​လပြည့်​​နေ့ မှာကျ ပွဲ​တော်​ပိတ်​ပြီဆိုင်​ရာပိုင်​ရာများ ​နေရပ်​ဌာ​နေသို့ ပြန်​လာနိုင်​ပါပြီလို့ အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ခွင့်​ပြုတယ်​ ဆိုရင်​ပဲ​တော်​လဲသံကြီးလိုဝမ်းသာလို့ မည်​တမ်းသံကြီး ကြားကြရတယ်​လို့တရုပ်​​တွေက​ပြောကြတယ်​၊
ဒါ​ကြောင့်​ ကဆုန်​လပြည့်​ ​နောက်​ပိုင်းမိုးတွင်းမှာ ​တောရဲတိရစ္ဆာန်​​တွေရဲ့ အန္တရာယ်​ရှိနိုင်​တာမို့ဘုရားသွားရင်​ သတိဝီရိယ ရှိကြဖို့ လိုတယ်​ ။
ကြိုကျ​ထီးရိုး ဘုရားပှဲရာသီက သီတငျးကြှတျ​လပွညျ့​​နမှေ့ ကဆုနျ​လပွညျ့​​နအေ့ထိ၇ လတိတိ​တောငျ​ ကငျြးပ
ဖှငျ့​ပှဲ​နနေဲ့ပိတျ​ပှဲ​နကေို့ အခနျးအနား နဲ့ ကငျြးပပွီး အမိနျ့​ပွနျ​တမျး ထုတျ​ရပါတယျ​။ ပှဲ​တျော​စတငျ​ခငျးကငျြး​တော့မှာမို့ ​တောပိုငျ​​တောငျ​ပိုငျ​ အ​စောငျ့​အ​ရှောကျ​မြားနဲ့ မွငျ​အပျ​မမွငျ​အပျ​ သတ်တဝါမြားဘုရားနယျ​​မွမှေ ​ဝေးရာသို့ ဖယျ​ရှား​ပေးကွပါဆိုပွီး အမိနျ့​ပွနျ​တမျး ထုတျ​ရပါတယျ​။
အဲဒီအခါမှာ ဝမျးနညျးငို​ကြှေးကွသလိုမြိုး ကွားကွရတယျ​လို့ ရနျ​ကုနျ​လသာမွို့နယျ​မှ တရုပျ​ဗုဒ်ဓဘာသာအသငျးက နှဈ​စဉျ​သှားဖူးလို့ ထူးဆနျးစှာကွုံခဲ့ကွားခဲ့ရလို့ သိရပါတယျ​။
ပိတျ​ပှဲ​နကေ့ဆုနျ​လပွညျ့​​နေ့ မှာကြ ပှဲ​တျော​ပိတျ​ပွီဆိုငျ​ရာပိုငျ​ရာမြား ​နရေပျ​ဌာ​နသေို့ ပွနျ​လာနိုငျ​ပါပွီလို့ အမိနျ့​ပွနျ​တမျး ထုတျ​ခှငျ့​ပွုတယျ​ ဆိုရငျ​ပဲ​တျော​လဲသံကွီးလိုဝမျးသာလို့ မညျ​တမျးသံကွီး ကွားကွရတယျ​လို့တရုပျ​​တှကေ​ပွောကွတယျ​၊
ဒါ​ကွောငျ့​ ကဆုနျ​လပွညျ့​ ​နောကျ​ပိုငျးမိုးတှငျးမှာ ​တောရဲတိရစ်ဆာနျ​​တှရေဲ့ အန်တရာယျ​ရှိနိုငျ​တာမို့ဘုရားသှားရငျ​ သတိဝီရိယ ရှိကွဖို့ လိုတယျ​ ။
“ဘ၀မှာ ခံရပေါင်း များလာတဲ့သူတွေက မာနပိုပြီးကြီး သွားတတ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ”
This Year : 277559
Total Users : 636584
Total views : 2984094